mushaTURKEYDunhu reMarmara34 IstanbulMeya İmamoğlu: 'Mutengo weChannel Istanbul Mubvunzo Mako'
Istanbul Metropolitan Meya Ekrem Imamoglu, Sultanbeyli'ye 20 akashanya kuguta redunhu. Imamoglu, vatori venhau vakapindura mibvunzo panguva yekuongorora kwake mumunda muSultanbeyli.
Kanal Iyo chiteshi Istanbul, ane mari yakakurukurwa nezvayo, Mr. Minister akataura nezuro '15 mabhiriyoni emadhora '. Pakamberi pemamirioni makumi mapfumbamwe emapaunzi zvaitaurwa. Zvakadiniko nezveaya mavara emubvunzo nezvemari? Mumushumo weEIA, kana Channel Istanbul ikaitika, kune makomendi anofanirwa kubviswa kubva mudunhu irori. Unoita sei nharaunda idzodzo? Nekuti zvinonzi zvanyanya zvichemo munzvimbo dzakatorwa ... "
Pane imwe nguva 'zviuru mazana mazana mapfumbamwe emapaunzi' yakadaidzwa. Pane imwe nguva yakanzi 'madhora zviuru makumi maviri.' Izvozvi inonzi "madhora gumi nemashanu emadhora '. Mr. Minister, munhu mumwe anobvunza; 'How many cubic metres of excavation achaburitswa, imarii unit? Ndoda kubvakacha bhiriji yakawanda, mutengo weuniti uye mutengo wakakwana. ' Iwe uri wepamusoro pasi. Nyika ino ine makondirakiti, vanhu vane hunyanzvi vanhu vakaita mabhiriyoni emadhora mune bhizinesi. Pane imwe nguva, mutengo unomuka muzuva rimwe. Nei kutenderera mazwi? Nyika ino ine mabhiriyoni emadhora mumabhizinesi, makondirakiti, kubvunza mafemu, vanhu vehunyanzvi. Nei mazwi ekutenderera kudaro? Ichi chidimbu chekeke? Mabhiriyoni gumi nemashanu emadhora, zviuru makumi maviri zvemadhora, madhora mazana manomwe emadhora ... Chidzidzo ichi hachisi kutamba kwemwana. Iyi inyaya yakakomba. Iyo inyaya iyo chikamu chikuru chevanhu veIstanbul vanopikisa. Mari inosvika 'mabhiriyoni mashanu emadhora pagore inozowana mari kubva kune ngarava' zvinodaro. Chii chandinga taura? Ini handitendi mune zvekunyepedzera zvehushumiri anotenda kuti muzukuru wake anoyambuka mugwagwa kwehafu yeawa. Isu isu, isu vanhu veIstanbul, masangano, mutengo wekurova. Ngatione mutengo? Ichokwadi here kana kuti kwete? Ndeapi mamwe madhiri ekuvaka? Kune anopfuura mamirioni emaguta ari kugadzirwa. Mukufunga kwangu, nhamba iyi yakakwira, 75 miriyoni.
Ndakakuudza. "Bhizinesi iri rakawedzera kusvika kumabhiriyoni zana, mazana maviri emamirion skrini paziratidzo aisazoponesa" ndakadaro. Muchaona. Pamwe chete tichaona kuti yakakwira sei mutengo. Mari isingafungidzirwe inosanganisirwa. Kunyanya kana iwe waisa pasi nebasa nezvivakwa mukati, kana pasina ruzivo rwekongiri nezvematope ari pasi pemakumi makumi matatu emamita, Mwari varopafadze guta! Mwari varopafadze pane zvakawanda nyaya, asi ndizvo mutengo chikamu. Naizvozvo, idzi nhamba dzemutengo hadzisi dzechokwadi, pane hunhu kure nemusimboti weruzivo rwakavhurika kune veruzhinji, kuita kuti vanhu vavhiringidzike nekuparadzira huwandu zuva rega rega. Mushure meizvozvo, tinowedzera kutsoropodza kongiri. Nekudzingwa, uku ndiko kutanga kwevanhu kubva kwavanogara, kubva munzvimbo dzavanogara. Uku kudana kunowana mazana ezviuru. Isu tinoona mepu ipapo. Isu tinoona Küçükçekmece, Başakşehir uye Arnavutköy pamepu.
Uku ndiko kutanga. Iwe uchaona kuchema. Sevanhu vanga vachigara mudzimba dzavo kwemakore makumi mashanu uye nezana ramakore, ivo vachatengesawo kuvanhu vanorota 'Endai ikoko, kuvaka dzimba dzemushandira pamwe uye kuvaka dzimba'. Rutivi urwu parwakakurukurwa, mushumo weEIA wakasungirirwa, zvino hurongwa hwakamiswa uye tsamba yekufambisa yakanyorerwa ipapo. Nhau dzaani? Chinhu chakadai chingaitika here? Turkey uye Istanbul zvokuti rakapidiguka, mumwe muitiro vakabatikana kuti mangwanani kusvikira manheru, kuti vachengete pfungwa. Vanhu muSultanbeyli vakaita matanho emakore. Vanhu vanga vachishanda pano kwemakore makumi matatu kuti vawane mhinduro. Kuve nenzvimbo, kuve neayo matendere. Unobva kwavakagara kwamakore makumi matatu, "Huya bye," unodaro. Kwete senzvimbo ino, yakagadzirirwa nzvimbo dzakagadzirirwa. Izvi zvinhu hazvisi nyore. Tora vanhu kubva kunzvimbo dzavanogara uuye navo uko. Ichi chidimbu chekeke? Chero bedzi ivo vakatarisa zvishoma. Uku kurwara kwakasiyana. Kana danho rechiteshi rikaenderera seizvi, tichanzwa mazana ezviuru zvevanhu achipururudza. Ndinovimba izvi hazviitike. Ndinovimba izvi hazvishande. Ndinovimba izvi zvichadzoka. Turkey ari Istanbul akamiririra akamiririra pachiitiko chinotyisa akati.
N Chii chakakurukurwa pamusangano wako muSultanbeyli? Ko sarudzo dzakakosha dzakatorwa kuSultanbeyli? Iwe unayo chero chirongwa kuunza Sultanbeyli mune ramangwana? "
Musangano wataita nhasi ndewekudyidzana kushanda musangano wekudyidzana nematunhu. Nhasi, takave nekukurukurirana kwakakosha uye kushandira pamwe naMeya wedu weSultanbeyli. Pano, zvirongwa zviripo zveMetropolitan, mabasa asina kupera, zvikanganiso, zvakambogadzirirwa asi zvisati zvatanga mabasa zvaikurukurwa. Izvi zvinosanganisira kufambisa, iyo nzira yeye ichangoburwa Çekmeköy-Sultanbeyli metro mutsara. semuenzaniso Ivo vakaburitsa matambudziko avo maererano neIETT mitsara. Kuti tiite zvinobatika nezve mhinduro yavo, isu takabva tasiya shamwari yedu ichitarisira IETT, tafura yakagadzikwa uye vari kushanda. Mukati mevhiki, makurukota emativi maviri aya achauya pamwe uye nekutsvaga mhinduro yezvinetso zvekufambisa. Kunyanya kumabvazuva kweIstanbul, kudivi reAnatoli, mushure meMarmaray uye nzira yepasi pevhu yakatanga kutamba, takawana kuti vanhu vaomerwa nekutaurirana pamutsetse wekumaodzanyemba. Takamupa nhau dzakanaka. Basa paari riri muchikamu chake chekupedzisira. Kunyanya shamwari vedu vanofarira kwazvo Sultanbeyli. Iyo hurongwa iri panzvimbo yekugonesa vagari vedu kuti vasvike pakakwira kana tramu neIETT mabhazi uye kuti vatapure mahara. Izvi zvichabereka kwazvo Sultabeyli. Takamupa nhau dzakanaka. Ari munzira yeku UKOME nhanho. Vamiriri vekamuri vaivemo. Yaive democracy kwazvo, Mr. President. Akadana meya. Takava nemusangano wakasvibira kwazvo.
Mutungamiri weCPP kuMutungamiriri weHurumende 11 mubvunzo pamusoro peIstanbul Channel
Channel Istanbul Mutengo we75 Bilion TL
Channel Istanbul Mari inokwenenzverwa
Meya Topbaş Akakurukurwa neIstanbul's Snow Test
Nzira Inotsanangurwa yeCanal Istanbul
Chiteshi cheGwara reMugwagwa weIstanbul Chakanga chagadziriswa
Nzira ye Kanal Istanbul, iyo inonzi njodzi yezvakatipoteredza
Nzira yeIstanbul's Way Yokuzivisa
Lütfi Elvan: Mugwagwa wemugwagwa we Kanal muIstanbul uchaziviswa nokukurumidza
Zvinyorwa zveChane Channel Istanbul zvakajeka
Mutungamiri Yıldırım, Nzira yeIndaneti yeIstanbul ichachinja
Nzira yeIstanbul yakagadziriswa neguva rekare
Kufungisisa nzira itsva yeKanal Istanbul
Nzira yeIstanbul Yenzira inoshandura mugumo weArnavutköy
Mangani mabhiriji achavakwa muIstanbul
Channel Mangani cubic metres yekuchera ichave muIstanbul
Mutengo weKanal Istanbul
Mabhazi anoenda kuSultanbeyli
Dambudziko rekufambisa reSultanbeyli